10 Ezona ndawo ziMibalabala eMhlabeni | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 10 Ezona ndawo ziMibalabala eMhlabeni
Uloliwe ohamba eDenmark, Qeqesha uhambo eFrance, Train Travel Holland, Uloliwe kuhambo Italy, Zokuhamba Qeqesha Poland, Train Travel The Netherlands, Travel Europe
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 29/10/2021)
Ifihlwe kude kwizihlwele zabakhenkethi, la 10 iindawo ezininzi ezinemibala emhlabeni, ziyakhuthaza ngokwenene. Amagcisa kunye nababhali baye bafumana inkuthazo kwezi ndawo zimibalabala. ke, iintsomi ziyenzeka, kwaye utyelelo nakweyiphi na yezi ndawo ngokuqinisekileyo iya kuba ngamava atshintsha ubomi nakuwe.
1. Ezona ndawo ziMibalabala eMhlabeni: Cinque Terre, ElamaTaliyane
Imini yasebusika engwevu okanye usuku oluhlotyiweyo oluhlaza okwesibhakabhaka, ICinque Terre inemibala kuyo nayiphi na imozulu. Izindlu ezintle zinombono wolwandle oluluhlaza kwaye zenze owona mfanekiso unemibala. Ngaphezu, yonke ilali oyindwendwelayo eCinque Terre inemibala emininzi kunenye, izindlu zipeyintwe ngombala otyheli, pink, bomvu, kunye neethowuni zeorenji.
ke, kunye nolwandle oluhlaza okwesibhakabhaka kunye neenduli eziluhlaza, Ummandla weCinque Terre e-Itali yenye yezona ndawo zinemibala ehlabathini. Olu hambo lunemibala luqala ngokwenene kwidolophu yaseLa Spezia, idolophu enkulu yezibuko kunye nendawo yokusuka kaloliwe waseCinque Terre. Ukuhamba ngeenxa zonke eCinque Terre ngololiwe yeyona ilungileyo kuba uloliwe udlula kwilali nganye, ke ungaya kwaye ubuyele nakweyiphi na indawo naphi na apho ufuna khona emini.
ILa Spezia ukuya eRiomaggiore ngoLoliwe
UFlorence uya eRiomaggiore Kunye noLoliwe
Modena ukuya eRiomaggiore Kunye noLoliwe
ILivorno ukuya eRiomaggiore Kunye noLoliwe
2. Iintsimi zeTulip, Inetherlands
Ipinki, mhlophe, orenji, mfusa, Amasimi eTulip aseHolland zinomlingo kuyo yonke imibala yomnyama. Eyona ndawo inokubona amasimi amahle e-tulip aseKeukenhof kwaye ungabuthanda ubuhle simahla. Amasimi amangalisayo yimizuzu elishumi elinesihlanu ehamba ukusuka eKeukenhof. kunjalo, ngokwenene ubuhle obunqabileyo buyaqhubeka eminye imizuzu elishumi elinesihlanu ukuya kwi-tulips ezintle ngakumbi.
Ungawonwabela lo mbono unemibalabala phakathi kuka-Epreli ukuya phakathi kuMeyi, Ngexesha leetulips’ nembali. Amasimi amakhulu e-tulip luhambo olufutshane olusuka eAmsterdam, ngoko iya kuba yinto emangalisayo uhambo losuku ukuya eNetherlands’ emaphandleni. Ukwengeza, unokurenta ibhayisekile njengabantu bendawo ukuze ubabaze iintyatyambo ezintle.
3. Ezona ndawo ziMibalabala eMhlabeni: Menton Cote D'Azur, Fransi
Kumanxweme amahle oMlambo iFrance, kodwa kude nepaparazzi eMonte Carlo, IMenton yidolophu entle eselunxwemeni. Izindlu ze-pastel ze-Belle Epoque, yongeza kubuhle bale lali iphupha kwaye mesmerize zonke iindwendwe okokuqala.
Unokufika eMenton kuyo nayiphi na indawo eFrance okanye e-Itali kuba ikufutshane kakhulu nomda wase-Italiya. ICote d'Azur yindawo entle eFrance kwaye yenza indawo entle yokuphumla. ke, ukongeza ekwenzeni imifanekiso emihle ngasemva kwidolophu enemibala, Ukuhamba ngenqanawa kuyindlela ebalaseleyo yokuchitha iholide emangalisayo eMenton.
4. UPelourinho, ISalvador
Isixeko esinesihloko phakathi kwesixeko, i Umbindi wesixeko esidala IPelourinho eSalvador yenye yezona ndawo zinemibala kwihlabathi liphela. Indawo ebekukho kuyo ifandesi yamakhoboka yeyona ndawo inemibala eqaqambileyo eSalvador. Lo mmandla uqhayisa ngeefacade ezimibalabala zezakhiwo zamakholoniyali kwaye likhaya lamagcisa, abaculi, kunye nobusuku obukhulu bobusuku.
Ngaphezu, emibalabala iPelourinho liziko leenkcubeko ezahlukeneyo apho unokufunda khona malunga nelifa lemveli laseBrazil kunye neAfrika. the indawo zokutyela ezinhle ePelo zinika izitya ezimnandi ezivela kuzo zombini ukutya. ke, emva kokuba ugqibile ukuthenga izinto zezikhumbuzo kwiivenkile ezininzi ezenziwe ngezandla ngeenxa zonke, uyakwazi ukungcamla i ukudla emangalisayo ukusuka kwizidlo zaseAfrika naseBrazil.
5. Ezona ndawo ziMibalabala eMhlabeni: Wroclaw, Pholend
Esona sixeko sikhulu kwiNtshona yePoland, I-Wroclaw yenye yeempawu ezifihlakeleyo zasePoland. UWroclaw unomtsalane indawo ekuyiwa kuyo eYurophu, kunye noyilo lwayo olunemibala luyenza ibe yenye ye imizi amahle eYurophu. Eyona ndawo inemibala kwimarike ephakathi, apho unokuthatha umoya odlamkileyo kwenye yeendawo zokutyela ezikufutshane.
ke, Qiniseka ukuba ubambe ikhamera yakho kunye nezihlangu zokuhamba ezifanelekileyo zokuhamba kwakho kwiindlela ezinemibala kunye nedolophu yakudala. Ukususela ebusika ukuya ehlotyeni, I-Wroclaw enemibala iya kukubulisa ngokwamkela ngokufudumeleyo, kunye nepierogi yasePoland efakwe iitapile, cheese, okanye isiqhamo.
6. Isiqithi saseBurano, ElamaTaliyane
Esinye seziqithi ezithathu ezaziwayo kufutshane neVenice, IBurano yeyona inemibala phakathi kweziqithi zintathu zintle zase-Italiya. A uhambo umkhumbi kude nelizwe, Izindlu zikaBurano ezipeyintiweyo zintle kakhulu off-season iholide yokufikela. Ngelixa ungasirhangqa isiqithi ngaphakathi 2 iiyure, uya kugqiba uchithe usuku lonke, ukuthatha nje imifanekiso.
Izindlu zabalobi ezinomtsalane ecaleni kweebhulorho kunye nemijelo emininzi yongeza ubuhle bukaBurano. Oku kongeza kwimifanekiso efana nekhadi leposi yenye yezona ziphezulu 5 iindawo ezimibalabala eYurophu. Ukutyelela eBurano luhambo olukhulu oluvela eVenice, ilungile ngokuthenga ngentambo kunye neAperol iziselo zasemva kwemini ngeembono zelagoon yaseVenetian.
7. Ezona ndawo ziMibalabala eMhlabeni: Nyhavn, Copenhagen
Izibuko elibukekayo lakha laphefumlela omnye wababhali beencwadi zabantwana ukuba babhale iNkosazana kunye nePea. Ewe, hayi. 20 Indlu yedolophu yayikhe yaba likhaya likaDanish Hans Christian Andersen. I-Nyhavn enemibala yayilizibuko elidlamkileyo, apho wawunokuva oomatiloshe’ iminxeba phantse kulo naluphi na ulwimi.
namhlanje, iNyhavn ehlaziyiweyo kulapho abantu bendawo beza kuphumla ekupheleni kosuku. Isidlo kunye nomculo wejazz, ukubukela ukutshona kwelanga phezu kwezikhephe kunye nezindlu zasedolophini ezimibalabala, ngamava amangalisayo.
8. IGuatape, Kholambiya
Ngeengcango, ezindongeni, nophahla lunemibala eyahlukahlukeneyo, Isixeko saseGuatape sesona sixeko sinemibalabala eColombia. Esi sixeko sinemibalabala yidolophu ekuchithelwa kuyo iiholide eColombia, ngemibono emangalisayo kunye neentaba. ngoko ke, libe umbono omangalisayo yedolophu yonke kunye nemibala yayo, Ungakhwela ukuya eLa Piedra del Penon, kwaye phezulu kwe 740 unyathela umbono omangalisayo weyona ndawo inemibala emhlabeni ivulekele kuwe.
kunjalo, ezona ndawo ziqaqambileyo zedolophu zikwiZocalos, iindawo ezisezantsi zezindlu. I-zocalos yimihombiso eyenziwe ngesandla, imizobo yezilwanyana okanye yeentyatyambo, kwaye ezinye ziyimihombiso nje emibalabala. Ukushwankathela, cwangcisa ubuncinci beentsuku ezimbalwa’ uhambo oluya eGuatape ukuze uphonononge ezona zitrato ziqaqambileyo nezinemibala ehlabathini.
9. Ezona ndawo ziMibalabala eMhlabeni: Imibala, Fransi
Izindlu ezinemibala enesiqingatha, imijelo ehonjiswe ngeentyatyambo, IColmar yidolophu entle yaseFransi apho iintsomi ziphila khona. Imijelo emihle iya kukukhokelela kwiindlela ezithandekayo kwiindawo ezivulekileyo. Apha, abalobi babedla ngokuhlala baze bancokole ngamabali emihla ngemihla namabali olwandle.
Ungafika eColmar usuka eBasel eSwitzerland okanye nasiphi na isixeko esikhulu eFransi, ngololiwe. ke, beka phantsi utyelelo lwakho eColmar kuhambo lwakho lweholide yaseYurophu. Olunye ukhetho oluhle kukuchitha iholide yakho yonke eColmar kuphela. Ngolunye uhlobo, zininzi izinto ekufuneka zenziwe eColmar ngaphandle kokuthatha imifanekiso yeyona ndawo inemibalabala eFransi. Umzekelo, ukuhamba ngomjelo, ukuthenga kwimarike egqunyiweyo, kunye nokungcamla iwayini yeAlsace.
EParis ukuya eColmar ngololiwe
Zurich ukuya eColmar ngololiwe
Stuttgart ukuya eColmar ngololiwe
I-Luxembourg iye eColmar ngoLoliwe
10. Chefchaouen, Morokho
Ifihlwe kwintlambo eluhlaza, nje 2 iiyure ukusuka eTangier, lelona litye liluhlaza nelixabisekileyo iChefchaouen. Ipeyintwe ngebhlowu namhlophe, ngezihombiso ezimibalabala, IChefchaouen yeyona ndawo iqaqambileyo eMorocco. Ngokufana nesiqithi saseGrisi iSantorini, izitalato ezintle kunye nezakhiwo zitsala oyena mhambi unzima.
Iintsomi zithi olona mbala lukhethekileyo lwaqala ngenkulungwane ye-15 xa amaYuda ayehlala kule dolophu incinane. ngoko ke, umbala oluhlaza ufuzisela isibhakabhaka kunye noqhagamshelwano noThixo. Ngelixa abantu abangamaYuda bengasengabo abahlali bale dolophu incinci, nangona kunjalo indawo yagcina ubuhle bayo kuyo yonke iminyaka. namhlanje, le dolophu incinci itsala amawaka abakhenkethi, ngoko ke zilungiselele ukudibana nezihlwele ezizele yimincili ngeenxa zonke kwiikona eziluhlaza.
Thina Gcina A Isitimela Ndingakuvuyela ukukunceda ucwangcise uhambo oluya e 10 iindawo ezininzi ezinemibala emhlabeni.
Ngaba uyafuna ukushumeka iposti yethu yebhlog ethi "Iindawo ezili-10 ezinoMbala kakhulu eHlabathini" kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fxh%2Fmost-colorful-places-world%2F - (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Imibala ColorfulCities ColorfulPlaces ColorfulTowns Mostcolorfulcitiesineurope mostcolorfulplacesworldwide
Indlela To mthwalo Uloliwe Trip Across Italy